नयाँ युगमा प्रवेश गरेको देश- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नयाँ युगमा प्रवेश गरेको देश
माघ २६, २०७५ मीनबहादुर विष्ट
काठमाडौँ — शब्दहरुको गोलाबारी बर्साएजस्तो गरी घरीघरी भनिएको छ : यो देश नयाा युगमा प्रवेश गरेको छ ।
र म खोजिरहेछु,
नयाँयुगमा प्रवेश गरेको त्यो देश।
देश बोकेर हिंडिरहेकाहरुले भनिरहेछन्,
तिनका सल्लाहकारहरुले भनिरहेछन्,
इन्टेलिजेन्स सम्हालेकाहरुले भनिरहेछन्,
बजेट बनाइरहेकाहरुले भनिरहेछन्,
योजना बनाइरहेकाहरुले भनिरहेछन्,
देश दौडाहामा निस्केकाहरुले भनिरहेछन्,
हल्लाखोरहरुले भनिरहेछन् :
नयाँयुगमा प्रवेश गरेको छ यो देश
र, म खोजिरहेछु
राष्ट्रिय गीत लेख्नेहरुले
टेलिभिजनमा समाचार पढ्नेहरुले
रेडियोमा धार्मिक पुराण वाचन
अखबारमा हेडलाइन लेख्नेहरुले
कहिले लय मिलाएर
कहिले लय बिगारेर
जो जहााजहाा छन्, तिनले त्यहाा–त्यहााबाट भनिरहेछन् :
नयाँयुगमा प्रवेश गरेको छ यो देश।
राष्ट्रिय पोसाक लगाएर भनिरहेछन्
राष्ट्रिय पोसाक उतारेर भनिरहेछन्
नयाा युगमा प्रवेश छ गरेको यो देश
विदेशी पोसाकमा सजिएर भनिरहेछन्
घरी चस्मा लगाएर भनिरहेछन्,
घरी चस्मा उतारेर भनिरहेछन्,
रक्सीको गिलास उचाल्दै, रक्सीको गिलास रित्याउादै
डिनर खानुअघि, डिनर खाईवरी भनिरहेछन् :
र, म खोजिरहेछु,
साइरन बजाउादै सवारीमा जानुअघि भनिएको छ,
उद्घाटनमा भनिएको छ,
सम्बोधनहरुमा भनिएको छ,
विसर्जनहरुमा भनिएको छ,
शुभकामनाहरुमा भनिएको छ,
राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा भनिएको छ,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा भनिएको छ,
मञ्च उक्लेर भनिएको छ, मञ्च
ओर्लेर भनिएको छ,
सूर्य उदाउादा भनिएको छ, सूर्य अस्ताउादा भनिएको छ :
नयाा युगमा प्रवेश गरेको त्यो देश।
नभेटिएर त्यो नयाा युगमा प्रवेश गरेको देश
आजित भएको छु म
र त्यो अब
एकादेशको कथा बनेको छ
यो ज्यादतीले कमजोर बनेको छु म
फैलिादै गरेका नयाा युगका हल्लाहरुले अब म बहिरो बनेको छु
यो भुलभुलैया हो कि नारा हो
नीति हो कि कार्यक्रम हो
घोषणा हो कि मञ्त्र हो
षड्यन्त्र हो कि मायाजाल हो
दर्शन हो कि धोका हो
निदको गोली हो या स्लो–पोइजन
यो ठूलो आशा हो या विकसित हुादै गइरहेको झन् ठूलो त्रास
आतंक हो या कुनै आउादै गरेको अशुभ समाचारको संकेत !?
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १२:२४
हातमा सुनको कचौरा
नेपालमा के छैन ? प्राकृतिक, जैविक, भौगोलिक हरेक दृष्टिले नेपाल परिपूर्ण छ । हाम्रो भूगोल हेर्नोस् त— गर्मीले उखुम पारेका बेला पानी परिदिन्छ । जाडोमा मज्जाले न्यानो घाम लागिदिन्छ, विना हावाहुरी । उत्तरमा विश्वका अग्ला हिमचुलीहरू छन्, वर्षैभरि नीला सुन्दर नदीहरू बहिरन्छ । तैपनि हामी मगन्ते छौं, हातमा छादैछ सुनको कचौरा ।
काठमाडौँ — अस्ट्रेलिया छ महिना बसाइको सुरुमा मेलबर्न सिटीस्थित एउटा नेपाली म:म: रेस्टुरेन्टमा खान बस्दा केही नेपाली युवा भेटिए ।
मनमा नमीठा भावनाहरू सल्बलाए, तिनलाई देखेपछि । हुन त तीमध्येकै थिए मेरा दुई सन्तान पनि । यिनीहरू पनि नेपालमा काम पाइएन भनेरै अस्ट्रेलिया उडेका थिए । मैले रोक्न खोजेको थिएँ तर मेरो एकल प्रयास सम्भव भएन ।
ती युवाहरू नजिकै बसिरहेका थिए नेपाली भाषामा मजाले कुराकानी गर्दै । मनमा निकै खसखस लागेर आयो र छोरीसँग सोधें–
‘छोरी † यी बाबुहरूसँग गफ गरे कसो होला ?’
‘पर्खनोस् बुबा † यहाँ नेपालजस्तो होइन । बिनाअनुमति केही कुरामा पनि हस्तक्षेपलाई राम्रो मानिँदैन । म सोध्छु, परिचय गराइदिन्छु अनि गफ गर्नुहोला ।’
‘एक्स्क्युज मी प्लिज † यहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेँ मैले । यहाँहरूसँग थोरै समय होला ?’
‘छ नि, भन्नुस् न † के कुरा होला ?’
‘उहाँहरू मेरो बुबा–ममी हुनुहुन्छ, केही दिनअघि नेपालबाट आउनुभएको । यहाँहरू नेपाली भएकाले बुबालाई कुरा गर्न मन लाग्यो रे । हुन्छ नि, अन्यथा त लिनु हुन्न नि ?’
‘हैन हैन, त्यस्तो मान्ने कुरै छैन नि †’
‘‘नमस्ते बुबा †’
‘नमस्ते बाबुहरू † मैले तपाईंहरूको गफमा बाधा पुर्‍याएँ हगि † माफ गर्नुहोस् है । यस मामलामा हामी नेपाली अल्लि बेसोमती छौँ क्यारे हैन ?’
‘हैन बुबा हैन, हामीले त्यस्तो मान्ने कुरा आउँदैन ।’
‘अँ त बाबुहरू † यता नेपालको कुन ठाउँबाट आउनु भएको हो र कति वर्ष भयो होला ?’
‘अँ बुबा † हामी पाँच जनामध्ये मेरो काठमाडौँ, उसको पोखरा, यसको विराटनगर, अनि यसको भैरहवा र अहिले भर्खर उठेर हिँड्नेको चितवन हो । हामी यता आएको पनि कसैको चार वर्ष, कसैको पाँच वर्ष र कसैको सात वर्ष पनि भयो ।’
‘बाबुहरूले देश फर्किने सोच कति वर्षपछिलाई बनाउनुभएको छ त ?’
‘खै बुबा † केही पैसा कमाऊँ । आउँदा त्यतिका पैसा खर्च गरेर आइयो । यतातिर पढाइको फी, खान, बस्न पुर्‍याउनै मुस्किल रहेछ । फेरि पीआर नभएसम्म भिसाका लागि वर्षैपिच्छे डलर तिरिरहनुपर्छ । केही न केही त डलर कमाउनुपर्‍यो नि देश फर्किन त । रित्तै फर्किने कुरा पनि त भएन नि ?’
अर्का एक जनाले अतिकति तीतै कुरा भने– ‘के फर्किनु र बुबा त्यो देशमा । केही छैन त्यहाँ । कति दु:ख गरेर पढियो । आफन्त मान्छे नहुनाले काम पाइएन । नातावाद, कृपावाद र घुसखोरी व्यापक छ । आफन्त मान्छे ठाउँमा नहुनेले पैसा खुवाउन सक्नुपर्‍यो । देश बनाऊँ भन्ने नेता कोही छैनन्, भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनता पनि कोही कांग्रेस छन्, कोही एमाले छन्, कोही माओवादी छन्, कोही राप्रपा छन्, कोही मधेसवादी छन् । नेपाली त कोही छैनन् बुबा नेपालमा । चुनावमा राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्छन् । अनि देश विकासको काम कसरी सम्भव छ र ? आशा मरेरै हो, हामी यतातिर
अड्किएको । यहाँ त बरु काम पाइन्छ सानो, ठूलो जस्तो पनि । काम पाएपछि खान, लाउन पाइन्छ । उता आमाबुबा र अरू परिवारलाई पाल्न सकिएको छ ।’
अर्का एक जनाले भने, ‘हेरौँ बुबा † केही वर्ष । सधैं अर्काको देशमा बस्न त के सकिएला र ? आफूलाई जन्म दिने बुबा–आमाले दु:ख गरेर हुर्काउनु, पढाउनुभयो । चटक्कै बिर्सन त के सकिएला र ? आफन्तहरू सबै उतै छन्, साथीभाइ छन् । अझ हाम्रा चाडपर्वहरू उतै छन् । यतातिर अस्ट्रेलियनहरू क्रिसमस र न्यू इयर आउँदा कस्तो उधुम रमाइलो गर्छन् । खान्छन्, रमाउँछन् । यो बेला हामीलाई कति खल्लो लाग्छ । लाग्छ, संसारमा जेसुकै पनि पाइएला डलर कमाउन सके तर आफ्नो संस्कृति र चाडपर्व डलरले किन्न पाइँदैन ।’
यति कुरा भइसकेपछि युवाहरू उठे र भने, ‘हवस् त बुबा † अहिले हामी लिजर टाइममा खाजा खान आएका । अब हामी आ–आफ्ना काममा फर्कनुपर्छ ।’
‘हुन्छ बाबुहरू † यहाँहरूलाई भेट्न र कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो । पछि यस्तै मौका पर्छ कि पर्दैन †’
उनीहरू उठेर गइसकेपछि हाम्रो अर्डरको खाजा म:म: पनि आयो । नेपालीले चलाएको रेस्टुरेन्टमा नेपाली स्वादको म:म: खाँदा नेपालमै बसेर खाएजस्तो लाग्यो । नेपालीहरू जहाँ पुगेका छन्, मिहिनेत गरेरै बाँचेका छन् । नेपालीहरू मिहिनेती र इमानदार हुन्छन् भनेर चिनाएका छन् । नेपालीहरूले केही गर्न नसकेको त नेपालमै हो । भान्छे नै चोर परेपछि परिवारका अरूलाई पनि के जाँगर आओस् र ?
खाजा खाएर ट्रेनमा छोरीको बासस्थान नर्थकोटतिर फर्किंदै गर्दा मनमा धेरै कुराहरू खेले । विशेषत: दोस्रो युवाले भनेको ‘त्यो देशमा केही छैन’ भनेका कुराले मनमा निकै पीडा दिइरह्यो । कसरी भन्न सकेको होला त्यो युवाले आफ्नो जन्मभूमिलाई ‘केही छैन’ भनेर ।
साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘के नेपाल सानो छ?’ भन्ने निबन्ध पढ्यो होला, त्यसले पनि । नेपालमा के छैन ? प्राकृतिक, जैविक, भौगोलिक हरेक दृष्टिले नेपाल परिपूर्ण छ । संसारमा कुन देशमा पो के हुन्छ र ? तिनै ढुंगा, माटो र पानी त हो जहाँ पनि । अरब मरुभूमिमा शुद्ध पानीका नदी, खोला कहाँ पाउनु ? पानीबिना वनस्पति उमँ्रदैनन्, खेतीपाती हुँदैन, चराचुरुंगीको चिरबिर कहाँ सुन्न पाउनू ? अस्ट्रेलियामै पनि के छ र ? उपचार नगरी माटोमा केही उम्रन्न, गर्मीमा वर्षा हुन्न, खेतीमा सिँचाइ गर्न पानी पाइन्न, जाडोमा हावाहुरीसँगै पानी पर्छ । हाम्रो भूगोल हेर्नोस् त— गर्मीले उखुम पारेका बेला पानी परिदिन्छ । जाडोमा मज्जाले न्यानो घाम लागिदिन्छ, बिनाहावाहुरी । उत्तरमा विश्वका अग्ला हिमचुलीहरू छन्, हिउँदमा हिउँ जम्मा गरेर वर्षैभरि नीला सुन्दर नदीहरू बहिरन्छ । तिनको महिमा कहिले बुझ्ने र हामीले ? हाम्रो उर्बर माटो प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान हो । अनि उर्बर माटो र अनुकूल हावापानी, नदीहरू अविरल बगाइरहने हाम्रा सर्वोच्च सुन्दर हिमाल हुने हामी नेपालीहरू पनि दु:खी, गरिब र मगन्ते हुने ? कहीँ यो पनि कतै सोच्न सुहाउने कुरा हो ? हाम्रो मगन्ते चिन्तनलाई औँल्याउँदै एकचोटि एक जना चिनियाँ विज्ञले भनेका थिए रे, ‘नेपालीहरू हातमा सुनको कचौरा लिएर मागी हिँड्छन् ।’
हामी गरीब हुनुमा हामीभित्रै ठूलो कमजोरी छ । हामी असल मान्छे बन्नै सकेनौँ कहिल्यै र असल नेता पनि कहिल्यै जन्माउन सकेनौँ । जन्मेकालाई पनि बचाउन सकेनौँ । हामीले जति इमानदार नेता मानेर कुर्चीमा पुर्‍याए पनि तिनको टाउको भैरव अर्यालले भनेझैँ साटिएको साटियै छ । यो केको विडम्बना हो ? भीम मल्लकी श्रीमतीले दिएको श्राप सधैँभर लागिरहन्छ त ? कहिल्यै मेटिँदैन ? कहिलेसम्म विश्वसामु हामी बद्नाम बनिरहने ?
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १२:२०